Psalmen 103 HTB - Nnwom 103 AKCB
1Me kra, kamfo Awurade;
na me mu ade nyinaa nkamfo ne din kronkron no.
2Me kra, kamfo Awurade,
na mma wo werɛ mmfi ne nneyɛe pa nyinaa,
3ɔno na ɔde wo mfomso nyinaa kyɛ wo
na ɔsa wo nyarewa nyinaa,
4ogye wo nkwa fi ɔda mu,
na ɔde adɔe ne mmɔborɔhunu bɔ wo abotiri,
5ɔde nnepa ma wo sɛ wʼapɛde,
na wo mmerantebere yɛ foforo sɛ ɔkɔre.
6Awurade yɛ adetrenee,
na obu wɔn a wɔhyɛ wɔn so nyinaa atɛntrenee.
7Ɔkyerɛɛ Mose nʼakwan,
na ɔmaa Israelfo huu ne nneyɛe.
8Mmɔborɔhunufo ne ɔdomfo ne Awurade,
9Ɔrenkɔ so mmɔ sobo,
na ɔrennya yɛn ho menasepɔw nkosi daa;
10Ɔnhwɛ yɛn bɔne ne yɛn nni sɛnea ɛfata
na ontua yɛn nnebɔne so ka sɛnea ɛte.
11Na sɛnea ɔsoro ne asase ntam ware no,
saa ara na nʼadɔe so wɔ wɔn a wosuro no no so.
12Sɛnea apuei ne atɔe ntam ware no,
saa ara na wama yɛn ne yɛn mmarato ntam kwan aware.
13Sɛnea agya yam hyehyew no wɔ ne mma ho no,
saa ara na Awurade yam hyehye no ma wɔn a wosuro no no;
14na onim sɛnea wɔyɛɛ yɛn,
ɔkae se yɛyɛ mfutuma.
15Ɔdesani de, ne nna te sɛ sare,
ɔyɛ frɔmfrɔm sɛ nwura mu nhwiren;
16sɛ mframa bɔ fa ne so a, na onni hɔ,
na ne sibea nkae no bio.
17Nanso efi mmeresanten kosi nnasanten
Awurade adɔe wɔ wɔn a wosuro no so,
na ne trenee wɔ wɔn mma mma so,
18wɔn a wodi nʼapam no so
na wɔkae di ne mmara so.
19Awurade asi nʼahengua wɔ ɔsoro,
na nʼahenni di ade nyinaa so.
20Monkamfo Awurade, mo a moyɛ nʼabɔfo,
mo atumfo a moyɛ nʼahyɛde,
mo a mutie nʼasɛm.
21Monkamfo Awurade, ɔsoro asafo nyinaa,
nʼasomfo a moyɛ nʼapɛde.
22Monkamfo Awurade, ne nnwuma nyinaa;
nea ɛwɔ nʼahenni mu nyinaa.
Me kra, kamfo Awurade!
AKCB : Nnwom 103